Isiphepho u-Ana sifika eSpain | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kubonakale sengathi bekungeke kufike, kepha ekugcineni kubonakala sengathi isikhathi seziphepho ezinkulu eSpain sesiqalile, futhi sikwenze ngendlela emangalisayo. Kunezexwayiso ezifundazweni ezingama-43 mayelana nemimoya emikhulu ebikhona futhi engaphinde ibe ngamakhilomitha ayi-150 ngehora.
Okwamanje, lawa yimonakalo edalwe yisiphepho u-Ana, owokuqala onegama.
4 Izwe lonke
Isithombe - Farodevigo, es
Ngeledlule ngeSonto, ngoDisemba 10, 2017, kuqoshwe imvula eningi kunenyanga yonke yangoNovemba odlule, esidale ukugcwala kwemifula yayo, kuze kube yizinsuku ezimbalwa ezedlule icishe yoma ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, izivunguvungu zomoya ezifika ku-140km / h zishiye amakhasimende angaphezu kuka-20.000 XNUMX engenawo ugesi: 11.700 ePontevedra, 5.000 e-A Coruña, abangu-3.000 320 e-Ourense, abangama-XNUMX eLugo, kanti abanye emadolobheni afana neNoia, Mazaricos noma iPorto do Son.
Isithombe - Lavanguardia.com
Kusukela ngo-22.00: 8 ngeSonto kuya ku-XNUMX ekuseni ngoMsombuluko, Izicishamlilo zenze ukungenelela okuyishumi ngenxa yokudilika komhlaba okwenzekile, zombili izingqwembe, amagatsha ezihlahla nezinto ezingaphambili ngokwazo futhi ngenxa yamachibi amanzi ashiywe yimvula enamandla.
Esiqhingini i-Balearic 'Ana' ushiye izehlakalo eziningi. Imimoya efinyelela ku-90 km / h yenze ulwandle lube nolaka, okwenza isiminyaminya ogwini lube yingozi kakhulu. Inhlokodolobha yesifundazwe, iPalma, ibe yisisulu se- izikhukhula, ukuguguleka kwenhlabathi nezihlahla eziwayo.
Ngenkathi kungekho ukulimala, ezifundazweni ezahlukahlukene ezinjenge-Andalusia, izindiza kuye kwadingeka ziphambukiswe futhi zikhanselwe. Ngakho-ke, ngenhlanhla, u-'Ana 'uyisikwele esishiyele ukulimala kwempahla kuphela.
Okwamanje ushiya leliya lizwe eya eDenmark, isikhungo sayo okulindeleke ukuthi sifike ngabo-1 ekuseni namhlanje. Kepha ngeke sikwazi ukwehlisa ukuqapha kwethu, ngoba kusondela izingqimba ezintsha ezizokwehlisa izinga lokushisa futhi zilethe nemvula.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isiphepho u-Ana sifika eSpain
Kungani izivunguvungu manje zinamagama?